Chii chinonzi Asterisk uye ingabatsira sei nekutaurirana nhare? | Linux Vakapindwa muropa
Chii chinonzi Asterisk uye inobatsira sei mukutaurirana nhare?
Isaac | | General, Free Software
La SARS-CoV-2 denda yakachinja nzira inoitwa zviitiko zvezuva nezuva, zvakaita sebasa. Nekuda kwenjodzi yekupararira, teleworking yakawedzera kubva pakaziviswa Nyika yeAlarm uye, nekumuka kutsva, icharamba iri imwe nzira yekusaomesesa zvachose basa rekambani.
Kubuda mune izvi dambudziko rezvemariMakambani ese, ese makuru uye madiki, anofanirwa kuita echimanjemanje uye kutanga shanduko yedhijitari iyo inovabvumidza kuti vakwikwidze zvakanyanya uye vakwanise kupa mhinduro kumatarisiro matsva senge akarerwa naCovid-19. Uye izvo zvinoshandawo kune vanozvimiririra vane vanovimba. Pakati peiyi shanduko tinogona kuzviwana isu nemubvunzo we iyo foni isina tambo yekutenga, sezvo zvichatibatsira kuti tive mukutaurirana nevashandi vanobva kumba.
1 Asterisk uye kuti ingabatsira sei kutaurirana munguva dzehosha
1.1 Asterisk zvakanakira
2 Dzimwe nhanho dzinopesana neSARS-CoV-2
Asterisk uye kuti ingabatsira sei kutaurirana munguva dzehosha
asiterisiki iyo inonakidza tekinoroji iyo inogona kubatsira bhizinesi rako munguva dzehosha. Kana iwe usingazvizive, ndeimwe yeiyo vatungamiriri venyika mune yakavhurwa sosi telephony mapuratifomu. Iyo huru software inopa iyo inogona kushandura yako pachako komputa ive yeyakaomesesa VoIP yekutaurirana server kuti basa rako rive nyore
NeAsterisk iwe unenge uine IP switchboard Inogona kushandiswa nema freelancers vanoda kutaurirana kwezvavanoita, uye zvakare makambani eese saizi. Muchokwadi, ihurongwa hwakatoshandiswa nemakambani mazhinji senge IBM, Google, nevamwe vazhinji.
Nekuda kwekunakira kwayo, yakavhurika sosi mhinduro kare inomiririra 18% yemafoni switchboards akaiswa, neAsterisk iri iyo ine chikamu chikuru chemusika mune izvi. Uye ndezvekuti kubvira payakatangwa anopfuura makore gumi apfuura, kuyedza kwayo uye nekusimudzira kusimudzira, kwakasimudzira kuti ive inodiwa nevazhinji.
Asterisk ndeimwe yemasisitimu ane zvakawanda zvinoshanda, zvinotyisa, uye kugona. Zvakare, inogona kushanda pamapuratifomu akasiyana siyana, senge Microsoft Windows, Apple macOS, GNU / Linux, uye mamwe maBSD. Uye zvakare, inogona kuve imwe nzira huru ye3CX maererano nePBX masystem efoni.
Shanduro yefoni ye IP kana IP PBX Iyo inowanzo ine imwe kana anopfuura mafoni SIP (vatengi), uye sevha. Navo, zvinokwanisika kufona zvemukati kuburikidza dhairekitori renhare / vashandisi varipo mukati medandemutande, kana kufambisa yekunze kufona kuburikidza neVoIP. Naizvozvo, inogona kuve huru sarudzo kumakambani ane vashandi vakasiyana kana madhipatimendi.
ari zvinobatsira zvakajeka:
Kurerukirwa kwekumisikidzwa uye kumisikidzwa kweako wega foni switchboard, sezvo ichiitwa ne software.
Administration yakapusa nekuda kweshanduro yayo.
Kuchengetedza kwakakosha kana uchishandisa vashandisi veVoIP, kunyanya kana uchiita kureba kana kufona kwepasi rese.
Nhare wiring inobviswa uye zvivakwa zvinoda kuisa waya kana kushandura hofisi kana imba.
Inokwanisika, kukwanisa kuwedzera mamwe makasitoma pazvinenge zvichidikanwa.
Vandudza kugadzirwa uye ini ndinobata mutengi.
usability yakavandudzwa kana uchishandisa mafoni eSIP.
Dzimwe nhanho dzinopesana neSARS-CoV-2
Naizvozvo, iwe unofanirwa kutanga chinja bhizinesi rako netekinoroji inodikanwa, kana usati watove. Hutachiona haugone kuomesa nyika yese zvakare, nekuti izvozvo zvaizosanganisira mamwe matambudziko anowirirana zvakada kufanana nedenda pacharo. Uye haifanire kuisa njodzi kuhutano hwevashandi futi.
Saka rangarira remekedza matanho ekutanga:
Kushandiswa kwemasikisi munzvimbo dzine vanhu vakati wandei. Kana zvichidikanwa, zvakare magurovhosi. Kugara uchiwana zvigadzirwa zvinogamuchirwa nezvitupa zvinovimbisa kuti zvinoshanda.
Remekedza kuregererwa kwenzanga. Ndokunge, dzivisa vanhu uye usambove uri pasi pe2 metres.
Utsanana hwakanaka uye disinfection emaoko, midziyo, nzvimbo uye nzvimbo dzekushandisa zvakajairika. Nezvigadzirwa zvinobudirira senge hydroalcoholic gels, zvinopa kanosvika 70%, pamwe nekuchenesa zvigadzirwa zvakaita se bleach.
Kushandisa kwekudzivirira masikirini pazvinenge zvakakodzera. Kunyanya muzvivakwa zvakatarisana neruzhinji.
Kurudzira teleworking uchienzaniswa neyemeso-kumeso-modhi uye / kana kupa vatengi vako mukana wekuti vashandise manhamba. Kuti uite izvi, unofanirwa kuzvishongedza nematekinoroji anonakidza anogona kukubatsira, senge Asterisk.
Kutora tembiricha kutarisa mamiriro ehutano. Optical tekinoroji mahemmeter anofanirwa kutengwa kuti aone isingabate fivha
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Chii chinonzi Asterisk uye inobatsira sei mukutaurirana nhare?
Ini handinzwisise kuti nei veSpanish vachiti "switchboard" kune iyo nhare yekuchinjana, sekunge ndiyo chete nzira yekuidaidza.
Pedro G. Manrique akadaro
Nekuti iyo «nhare yekuchinjana» chivakwa chepakati kana hombe chaive nematanho ese ewachinja network uye maDSLAM. Zvino, ndinofunga izvo zvichange zvachinja asi ndizvozvo.
Inodaidzwa kunzi switchboard nekuti yaive diki yekutsinhana umo vashandisi, vazhinji vacho, vaiita shanduko yemanyorerwo, nekudzvanya kune dzimwe nzvimbo nevamwe, uye chishandiso ichi chaive pakati. Icho chinhu etymological.
Pindura Pedro G. Manrique
Izvo zvinonyanya kubatsira, ndanga ndichishanda nevoip nzvimbo kwemakore, ini ndinosiya yangu email kana iwe uchida zano
Imwe yemabhenefiti akakosha kugona kuita telework yakabatana neVPN yekambani uye kupindura foni yekambani sekunge wanga uri muhofisi.
Zvimwe kubva panharembozha, - munhu wese anogona kumisikidza mufoni kunyorera IP / PBX yekuwedzera uchishandisa data mumugwagwa kana WiFi kumba - kungave kubva pakombuta kana SIP foni.